Fampiofanana Android amin'ny fampivoarana & fitsapana
Android OS (rafitra fandidiana) dia novolavolain'ny Google izay ampiasain'ny 80% amin'ny finday manerantany. Midika izany fa misy fotoana mahafinaritra azo atao Android mpandraharaha amin'ny ho avy. Raha heverintsika ny ahafahan'ny mpiserasera aterineto manaraka (izay mihoatra ny 1 miliara) dia afaka miditra aterineto voalohany amin'ny findainy. Fampandrosoana no fahafahana hampivelatra fampiharana Android sy fakan-tsarimihetsika tsara ho anao izay hanome anao fahafahana mahafinaritra hampifandray ny isan'ireo olona izay mitodika any amin'ny aterineto ka nahafahan'ny finday finday mba hahitana fampahalalana momba ny zava-drehetra raha mandeha na mihetsika ao anaty fiara na lamasinina .
Soa ihany ho an'ireo olona liana amin'ny fianarana ny fampiharana fampiharana Android, ao anatin'ny dingan'ny fampivoarana ny mpanjifa amin'ny mpamorona, misy safidy maro hikatsahana izay hanao asa miavaka amin'ny fanampiana anao hianatra lesona amin'ny programa Android sy Java. Ho takatrao ihany koa fa nanomboka nanomboka lalao mampientanentana ianao ho lasa mpandrindra Android manam-pahaizana manokana.
Ny fianarana androany fianarana dia natao ho an'ireo mpianatra vaovao ho an'ny Android ary te-hianatra ny fomba ahafahan'izy ireo manangana apps androany matanjaka ary hitsapa azy ireo. Ny zavatra tsara momba ity fampiofanana android ity dia tsy mila manana fahaizana matihanina amin'ny famolavolana ianao mba hisoratra anarana amin'ity andro fianarana android ity. Raha fantatrao ny fomba fampiasana finday hendry handefasana aterineto na mandefa sary sy mailaka amin'ny namanao, dia ampy izany.
Ny fianarana zavatra vaovao dia tsy mora:
Raha fantatrao fa ny fianarana zava-baovao dia tsy mora raha fampiroboroboana fampiharana Android / Testing na famolavolana sary mampiasa Photoshop na CorelDraw. Tsy maintsy manana fitiavana sy hafanam-po ianao hianatra zava-baovao ary avy eo mandroso mba hahazoana fahaizana manokana ao anatin'izany. Tsara ny fampiofanana andro maromaro sy fampiofanana amin'ny andro Android / Ny fitsapana dia hanampy anao handeha amin'ny dingana amin'ny fanaovana fampihetseham-pandaharana androany tsara indrindra izay mitovitovy amin'ny parameter ny endrika sy ny fonction.
Mifidy ny Institiota fanofanana tsara indrindra:
Amin'ny fiafaran'ny fampiofanana Android Training, dia hanana fahalalana ampy ianao mba hampivelatra sy hizara apps tsotra nefa mahery vaika izay azonao zaraina amin'ireo olom-pantatrao. Tena manan-danja tokoa ny misafidy ny mpiasan'ny fandefasana amim-pahendrena, satria manam-pahaizana manokana momba ny IT, toy ny Innovative Technology Solutions, manana ny fahaiza-manaony sy fahalalana izay omena anao.